tsy misy poizina sy tsy manimba ny siramamy China Manufacturer
Description:Tsy misy fanadiovana tsy misy dikany ho an'ny fiaramanidina,Fanadiovana tsy misy poizina ho an'ny fiaramanidina,Tsy misy poizina sy tsy misy fitandremana
Home > Products > Hydrofluoroether Clean Agent > Fitaovana fanadiovana ho an&#39;ny Birao Elektronika > tsy misy poizina sy tsy manimba ny siramamy
tsy misy poizina sy tsy manimba ny siramamy
Ny fampiasana solosaina ampiasaina
Ny Hlean Codorless Cleaning dia vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana, izay sady tsy misy loko no sady tsy misy poizina, sady tsy misy poizina sy tsy misy mampidi-doza, ary mitoka-monina. Ny hydrofluoroether cleaning agent dia tsy fahampian-tsakafo avo lenta amin'ny dielectric, ny tebiteby ambany dia ambany, ny hodi-jiro ambany, ny tsy fahampian-tsakafo tsy misy fialana ary ny fahamendrehana tsara. Ny HFE hydrofluoroether dia mety hiparitaka sy hiparitaka amin'ny rindrin'ny fitaovam-panafody sy ny poreau isan-karazany, ary misy vokany tsara amin'ny famonoana, ny fampangatsiahana, ny famafazana sy ny fanadiovana. Ny vahaolana fanadiovana HFE dia manana tsiranoka maromaro kokoa, ary azo ampiharina amin'ny fitaovana fanadiovana isan-karazany. Ny hexafluoropropyl methyl ether dia ampiasaina betsaka amin'ny fanadiovana ny fitaovana fototra azo antoka, toy ny fanadiovana ny mari-pahaizana elektronika, ny PCB, ny fitaovana elektronika, ny fizarana mazava tsara, ny fanadiovana ny loko / solosaina samihafa, ny solika, ny LCD sy ny sarany mafy sns., ary azo ampiasaina ihany koa mba handotoana sy handotoana, fanandramana amin'ny fanodinana elektronika na fisedrana amin'ny rivotra, ary solvent.
7. Ny vahaolana amin'ny fikojakojana ho an'ny fitantanana elektronika rehefa vita ny fanadiovana dia azo averina amin'ny alàlan'ny famokarana, hampidina ny fatiantoka , hamenoa ny vidiny.
Electronic Circuit Board Rafitra fitsinjarana, fitehirizana ary fitaterana:
Ity Solutions Solutions ity dia feno 25kg / barrel, na amin'ny fanamafisana ny mpanjifa, mora voatahiry sy nentina.
Tsy misy fanadiovana tsy misy dikany ho an'ny fiaramanidina Fanadiovana tsy misy poizina ho an'ny fiaramanidina Tsy misy poizina sy tsy misy fitandremana